Emergency data error Repair (MTK) ~ သန်းတိုးအောင် နည်းပညာမှတ်စု
Emergency data error Repair (MTK)
Emergency data error ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုရင် Flashtool နဲ့ Flash တဲ့အချိန်မှာ Userdata မပါလို့ဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာ userdata ဖိုင်တွေပေးထားပါတယ် သက်ဆိုင်ရာ Scratter အလိုက် Userdata တခုတည်းကိုပဲအမှန်ခြစ်ပြီး flash ပေးလိုက်ပါ မရရင်တော့ Hardware error လို့ပြောကြပါတယ် Hardware error မဟုတ်ရင်တော့အလုံးတိုင်းရပါတယ်ခင်ဗျာ။
G610-U00/T-10 = MT6589
G730-U00/T00 = MT6582
Y511-T00/U00 = MT6572
အခြား MT တွေဆိုရင်လည်းသက်ဆိုင်ရာ Userdata ကိုရှာပြီး flash လိုက်ပါ
Download Emergency data error Repair userdata
Zayar Aung September 28, 2016 at 8:03 PM
G6-U00 MT ဘာလဲ brother
htetaung wai October 19, 2016 at 11:14 PM
htetaung wai October 19, 2016 at 11:29 PM
Trooper King December 15, 2016 at 6:28 PM
Y550-L01 Emergency Data Error Plz give me any solution.
ye tun December 23, 2016 at 11:57 AM
Qaiser Munir May 19, 2017 at 8:10 PM
sir please give me method . model mt 6582
Huawei Honor 3C H30-U10 erro emergency data erro.
Denial zwelay July 5, 2017 at 7:15 PM
Link မ​တွေ့ဘူး bro ပြန်​စစ်​​ပေးပါလား 😊😊
Kyawnaing Tun March 5, 2018 at 11:53 AM
G730 uoo powerဖွင့်﻿လိုက်﻿ရင်﻿တုန်﻿﻿နေတယ်﻿ဘာမှမလာဘူးဘာerrလဲ﻿ကူညီ﻿ပေးပါဗျ
Than Hlaing Myint March 5, 2018 at 2:29 PM
board firmware ရေးကြည့်ပါလား bro
Kyawnaing Tun March 5, 2018 at 12:36 PM